'मामुबाबाले हाम्रो कुरा ध्यान दिएर सुनेको देख्दा अझै सुनाऊँ जस्ताे लाग्छ' :: रुविआ पराजुली :: Setopati
'मामुबाबाले हाम्रो कुरा ध्यान दिएर सुनेको देख्दा अझै सुनाऊँ जस्ताे लाग्छ'
काठमाडाैं, चैत २६
मेरो नाम रूविआ पराजुली हो। म बुढानिलकण्ठ स्कुलमा कक्षा ५ को परीक्षा सकाएर बसेकी छु। हाम्रो परीक्षा कोरोना भाइरस कारणले गर्दा फागुन ३० गते नै सकियो। त्यसपछि म काठमाडाैंबाट हेटौंडा आएँ।
अहिले चीनको वुहानबाट सुरू भएको कोरोना भाइरस विश्वका २ सयभन्दा बढी देशमा फैलिएको छ। यसको जोखिम नेपालमा नफैलियोस् भनेर नेपाल सरकारले अहिले लकडाउन गरेको छ।
यो भाइरस एकअर्काबाट श्वासप्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने रहेछ। चीन नजिकै भए पनि हाम्रो देशमा यो फैलिन पाएको छैन। तर पनि हामी सबै सचेत रहनुपर्छ। नेपालमा अहिलेसम्म ९ जनालाई यो रोग लागेको समाचारबाट सुनेकी थिएँ। हामी पनि सरकारले गराएको लकडाउनको पालना गरी घरभित्रै बसेका छौं।
यो समयमा मैले हाम्रो राष्ट्रिय गान, जिंगल बेल, बाबा ब्ल्याक शीप, ट्विंकल ट्विंकल, ह्याप्पी बर्थ-डे टु यु जस्ता गीतको धुन बजाउन सिक्दैछु। मलाई गीत-संगीत अत्यन्तै मनपर्छ। बहिनी र म युट्युबमा गीत लगाएर गाउने र नाच्ने पनि गर्छाैं।
ठूला र शक्तिशाली देशमा काेराेनाकाे प्रभाव झन बढी देखिएको छ। 'किन यस्तो भएको होला?' भनेर मैले मेरो अभिभावकलाई सोधेकी पनि थिएँ। ती देशका नागरिकले याे भाइरसबाट बच्न पूर्वसावधानी नअपनाएकाे र सतर्क नभएकाले त्यस्तो अवस्था आएको रहेछ। हामी पनि सतर्क भएनाैं भने यो भाइरसले हाम्राे देशमा पनि आतंक मच्चाउँछ।
मेरी एउटी बहिनी छिन्। मलाई उनको निकै माया लाग्छ। उनलाई भेट्न पाउँदा मलाई धेरै नै खुसी लाग्यो। मैले भनेअनुसार मामुले हाम्रो बिदाको लागि भनेर बजारबाट पेनिका किनिदिनुभयो। योबाहेक हाम्रो लागि खेल्ने ल्यापटप, लुडो, चेस, डोरी आदि छन्।
मेरी बहिनीलाई पनि चेस खेल्न आउँछ। हामी दुई जना चेस खेल्दा कुनै गेम उनले जित्छिन् त कुनै मैले। बहिनीले मलाई यो खेलमा हराएको देखेर मलाई अचम्म लाग्छ। उनी अब २ कक्षामा पढ्ने तर म भने ६ कक्षामा। उनले मलाई मात्र होइन घरीघरी बाबा र मामुलाई पनि जित्छिन्। त्यसैले उनलाई सबैभन्दा चेस खेल्न मनपर्छ।
रुविआ र उनकी बहिनी।
हाम्रो परिवार अहिले घरभित्रै बसेकाे छ। बाबा र मामुले हाम्रो निकै ख्याल गर्नुहुन्छ। स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउने खानेकुरा पकाएर दिनुहुन्छ। मलाई रोटी अत्यन्तै मनपर्छ। यो बिदामा मैले सुख्खा रोटी बनाउनका लागि पिठो मुछेर बेल्न अनि पकाउन पनि सिकेँ। तरकारी काट्न, भाँडा माझ्न र सरसफाइ गर्न मामुबाबालाई सघाउँछु पनि।
लामो बिदा मामुबाबासँग बिताउन पाउँदा निकै खुसी लागेको छ। बाबाले निकै मिठो खाना पकाउनुहुन्छ। हाम्रो रेखदेखमा निकै खट्नुहुन्छ। धेरै किसिमका खेल खेलाउनुहुन्छ। चेस र लुडो खेल हामी सबै जना मिलेर खेल्छौं। त्यति बेला निकै रमाइलो लाग्छ।
मैले यो बिदामा कविता पनि लेखेकी छु। प्रकाशनका लागि पत्रिकामा पठाएकी छु। फुर्सद हुनेबित्तिकै मलाई चित्र बनाउन मन लाग्छ। कोपिला पत्रिकामा तीन पटक प्रकाशन पनि भएको छ। पत्रिकामा मेरो प्रयास छापिँदा निकै खुसी लाग्छ।
खाली समयको सदुपयोग गर्नका हामी अनलाइनबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सक्दा रहेछौं। हाम्रो पढाइसँग मिल्ने अति नै उपयोगी सामग्रीहरू पढ्न पनि सकिँदो रहेछ। मामुबाबाले समाचार सुन्ने समयमा हामी पनि सँगै बसेर समाचार सुन्छाैं।
म बेलुकीपख बारीमा गएर बिरूवाहरूमा पानी हाल्छु। केही दिनअघि मैले बारीमा फर्सी र घिरौंलाको बीउ रोपेँ। कहिले उम्रिन्छ होला भनेर सधैं हेर्छु। बारीमा काम गर्न त कति रमाइलो हुँदो रहेछ।
बहिनीको कक्षा दुई र मेरो कक्षा ६ का केही किताब हामीसँग छन्। बिहानको समयमा हामी खाजा खाएर पढ्ने-लेख्ने गर्छाैं। गणितको रेखा, कोण, वस्तुको आकार, परिमिति, क्षेत्रफलको बारेमा मैले पढिसके। अंग्रेजी विषय मलाई सबभन्दा मनपर्ने विषय हो। ६ कक्षाको अंग्रेजी किताबमा भएका कथाहरू मैले पढिसकेँ। नेपाली किताब पनि पढ्न सुरू गरेकी छु। मेरो पढाइमा मामुले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ।
हामी सबैजना मिलेर शब्द र गीतको अन्ताक्षरी खेल्छौं। त्यसैगरी केही भजनका गीत गाउन पनि मैले सिकेकी छु। कुनै समयमा हामीलाई मामुबाबाले कथाहरू सुनाउने गर्नुहुन्छ। हामी पनि आफूले किताबमा पढेका कविता, कथा, चुट्किलाहरू सुनाउँछौं। मामुबाबाले हाम्रो कुराहरू ध्यान दिएर सुनेको देख्दा अझै सुनाऊँ जस्ताे लाग्छ।
हाम्रो मामुबाबाले पनि यो समयमा लेख लेखिरहनुभएको छ। त्यसैले पनि मलाई यो लेख लेख्न मन लाग्यो। कापीमा मैले यो सबै लेखेर मामुलाई कम्प्युटरमा टाइप गर्न दिएकी छु।
यो मेरो पहिलो प्रयास हो। सेतोपाटीले बालबालिकालाई लेख्नका लागि सम्पादकीय नोटमा केटाकेटीहरूका लेख शृंखला सुरू गरेको सूचना पाएर मलाई अझै हौसला मिल्यो।
मेरो लकडाउनको समय यसरी नै बितिरहेको छ। हामीले खाली समयलाई नचाहिने काममा प्रयोग गर्नु हुँदैन। परिवारसँग बसेर समयको राम्रो उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। कतिपय साथीहरू त आफ्नो परिवारबाट टाढा हुनुहुन्छ होला। जो जहाँ जसरी जोसँग हुनुहुन्छ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै समयको राम्रो सदुपयोग गर्नुहोला।
सबैलाई सु-स्वास्थ्यको शुभकामना!
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २६, २०७६, ०१:२९:००